ဂျိုနသန်ဝိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျိုနသန်ဝိတ် (အင်္ဂလိပ်: Jonathan Wade) (၁၇၉၈ - ၁၈၇၂) သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား နှစ်ခြင်းဘုန်းကြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာသို့လာကာ မွန်၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီဒေသတို့တွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၄ ရေးသားခဲ့သည့် စာအုပ်များ
၁၇၉၈ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်မြို့၌ မွေးဖွားသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်တွင် နှစ်ခြင်းခံပြီး နယူးယောက်၊ ဟာမီတန်ရှိ နှစ်ခြင်းဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း၏ ပထမဆုံးကျောင်းသားများအနက်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ ဇနီးလောင်း ဒက်ဘိုရာ (Deborah Lapham Wade, 1801 - 1868) နှင့် ဘုရားကျောင်းတွင်ပင် စတွေ့ခဲ့သည်။  ၁၈၂၂ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဗမာစာ စသင်သည်။ ဟာမီတန်မှ စေလွှတ်သည့် ပထမဆုံးသာသနာပြုအဖွဲ့နှင့် ထွက်ခွာလာသည်။ 
ခွင့်ပြန်နေသည့် အန်းဂျက်ဆင် (Ann Hasseltine Judson, 1789-1826) နှင့်အတူ ၁၈၂၃ ခုတွင် မြန်မာသို့လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တို့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲရာ ဝိတ်နှင့် အခြားသာသနာပြုလာသူများ အထိန်းသိမ်းခံရသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ရက်အကြာတွင် ပြန်လွတ်သည်။ စစ်ပွဲကာလအတွင်း ကလကတ္တားတွင် သွားနေကာ ဗမာအဘိဓာန်ကို ပြုစုသည်။ 
၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် တိမ်းပါးသွားပြီဖြစ်သော အန်းဂျက်ဆင်၏သမီးကို ခေါ်ကာ မြန်မာပြည် ပြန်လာသည်။ မော်လမြိုင်၌ အခြေချသောအခါ ဂျိုနသန်က အဘိဓာန်ကို ဆက်လုပ်သည်။ ဒက်ဘိုရာက ကျွန်များအား ဝယ်လွှတ်ခြင်း၊ နေ့ကျောင်းဖွင့်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစည်းရုံးမှုလုပ်ခြင်းတို့ လုပ်သည်။  ကရင်လူမျိုးများ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း သိရသည့်အခါ ဝိတ်ဇနီးမောင်နှံတို့ တောဘက်သို့ပင် သွားရောက်စည်းရုံးမှုများ လုပ်သည်။ စကောကရင်ဘာသာကို ဂျိုနသန်က လေ့လာခဲ့ရာ ယင်းဘာသာဖြင့် သမ္မာကျမ်းပြန်ဆိုရာ၌ ကောင်းစွာအထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်သို့ ခွင့်ပြန်စဉ်၌ နောက်ထပ်လွှတ်မည့် သာသနာပြုအဖွဲ့များအား ဗမာနှင့် ကရင်ဘာသာကို တစ်နှစ်ကြာ သင်ပေးသည်။ ၁၈၃၄ ခုနှစ်တွင် သာသနာပြုအဖွဲ့သစ်များနှင့် မြန်မာပြည် ပြန်လာသည်။ နွေရာသီတွင် ဘာသာရေးစည်းရုံးမှုခရီးများ ထွက်သည်။ ဒက်ဘိုရာက သမ္မာကျမ်းလာလမ်းညွှန်များ ပေးခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပြီး ဂျိုနသန်က ဒက်ဘိုရာသင်ကြားပြီးသူများကို စစ်ဆေးကာ နှစ်ခြင်းခံပေးသည်။ မိုးရာသီတွင် ဒက်ဘိုရာက စာသင်ကာ ဂျိုနသန်က ဘာသာပြန်အလုပ်ကို ပြန်လုပ်သည်။
၁၈၅၀ ခုနှစ်တွင် အဒွန်နီရမ်ဂျက်ဆင် (Adoniram Judson, 1788-1850) ကွယ်လွန်ပြီးနောက် မော်လမြိုင်သာသနာပြုအဖွဲ့ကို လက်လွှဲယူကာ ဗမာများနှင့် အခြေကျလည်ပတ်နိုင်ရန် စီမံပေးသည်။ အစိုးရပညာရေးအတွက် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။
ဂျိုနသန်၏ အောင်မြင်မှုမှာ စကောကရင်ဘာသာနှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်ငါးအုပ်ပင် ဖြစ်သည်။
၁၈၇၂ ခုနှစ်၌ မော်လမြိုင်၌ပင် ကွယ်လွန်သည်။
Sau Kao-Too and J. Wade. Thesaurus of Karen Knowledge Comprising Traditions, Legends or Fables, Poetry, Customs, Superstitions, Demonology, Therapeutics, Etc. Tavoy: Karen Mission Press, 1843.
Wade, J. The Anglo-Karen Dictionary. Revised and completed by Mrs. J. P. Binney. Rangoon: American Baptist Mission Press, 1883.
Wade, J. A Dictionary of the Sgau Karen Language. Recompiled and revised by E. B. Cross. Rangoon: American Baptist Mission Press, 1896.
Wade, J. Karen Vernacular Grammar. Rangoon: American Baptist Mission Press, 1897.
Wade, J. A Vocabulary of the Sgau Karen Language. Tavoy: Karen Mission Press, 1849.
↑ Walter N. Wyeth (1891) "The Wades: A Memorial". Philadelphia, Penn.
↑ Dana L. Robert (1998) "Biographical Dictionary of Christian Missions", Macmillan, New York.
↑ Deborah B. L. Wade (1828) "The Burman Slave Girl". J. Loring's Sabbath School Book Store, Boston.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျိုနသန်ဝိတ်&oldid=442318" မှ ရယူရန်
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၁:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။